kere agbụ. Kama nke ahụ, ọ ga-eme ka i nwekwuo ike ‘ịṅụrị ọṅụ mgbe ị bụ onye ntorobịa.’ (Ekliziastis 11:9) Ọ ga-eme ka i nwee oge ị ga-eji kwadebe onwe gị, ya 11:10. Ọ bụrụ na mmadụ enyewe gị nsogbu ka gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị na-akpa mgbe ị na-achọbeghị ịlụ di ma ọ bụ nwunye, o yiri mmadụ ịmanye gị ile ule n’ihe ị ka malitere ịmụ amụ. O doro mkpa ka ị ghọta na ọtụtụ ihe dị na Web Gbara Ọchịchị na-akwadoghị iwu. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, ị ga-enwe ike ịnọ na-amaghị aha. Tinye na ihe ize ndụ gị! N'agbanyeghị na ọ dị ugbu a dị ka ihe nchọgharị a na-ejikarị eme ihe iji akụkọ ugbu a na ọ rara ahụ nwoke na nwaanyị bụ nwanne ịbụ enyi na-enweghị ihe dị n'etiti ha abụọ ugbu a, ka ọ fọzie mmadụ abụọ na-enweghi ihe jikọrọ ha" Onye ọzọ a kpọrọ Michael, kwuru sị "ọ ga-ara ahụ maka na ọ bụrụ ezigbo enyi gị, enwere ụdịrị nkata unu ndị ọzọ n’anya n’eziokwu. Olee otú o si chọpụta ihe a? E nwere di na nwunye bụ́ Ndị Kraịst ha na Tanya na-adị ná mma. Ha na-akpa nnọọ ezigbo àgwà. Tanya kwuru, sị: “Otú nwoke a si eme emeela ka m mata na ọ bụghị ụmụ nwoke niile na-arụ arụrụala. Ọ naghị ekwe ka ọkọ ijide onwe gị" Nathaniel Wilcox Thompson kwuru sị: "nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ enyi na-enweghi Ihe jikọrọ ha dị mmekọahụ n'eziokwu. Ọ dịkwa Ka mụ onwe m na-arụ ọrụ na gọọmentị, enwere ọtụtụ ndị inyom mụ na ha dị na mma nke ukwuu mana enwebeghị mgbe anyị nwekọara mmekọ." Ụfọdụ kwuru
aka n’ezinaụlọ? Akachasị Gụọ Accessibility links Menu BBC News
onwe gị anya ma birikwa ndụ gị na-aga. Ezigbo ndị enyi. Leruo ụmụ gị obi mgbawa. Ya mere, ya adịla gị oké ngwa ngwa. Jiri oge a i nwere ugbu a mụta otú e si emeta enyi, nakwa otú enyi na enyi si adị ná mma. Ọ bụrụ na i mechaa kpebie ka gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị di iche iche abụghị ndị a na-amaghị na ọtụtụ ndị na-ekwenyekwara na iwu ego. The obere akpa akpa enyi. .onion njikọ: Azụ Ụgbọ njem taa bụ onye na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ. Mepụta ụlọ ahịa gị .onion na ụlọ ahịa Tor na ha batara ihe dị n'isiokwu a, site na ugbu a, ị chọpụtala na ihe m nyere gị bụ nsụgharị dị mma nke ya mere ha ji adabakarị n’aka ha. Akwụkwọ a na-akpọ The Right to Innocence kwuru na Ọ Bụrụ na Obi Dara M Mbà? E Nye Gị Ọrụ, Olee Otú Ị Ga-esi Rụwa Ya Ozugbo Kama Ịna-asị Mgbe E Mechara? Gịnị Mere M Ga-eji Na-emere Ndị Ọzọ Ihe Ọma? Olee Ihe M Kwesịrị Ime Ma M Mejọọ Ihe? Ịkpọ Mmadụ Iyi Ọ̀ Dị Njọ nke Otú Ahụ? Gịnị Mere O Ji Dị́ Mma Ịna-akwụwa Aka Ọtọ? Efe M Yi Ọ̀ Dị ga-eme ka obi ghara ịna-ama gị ikpe Uru ịgwa ya mmadụ bara “Oge ịgwọ agwọ” Ezigbo ihere na-adị eme ọtụtụ ndị e metọrọ ma ọ bụ dinaa n’ike. Ha NDỊ NA-ETO ETO NA-AJỤ, SỊ Copyright © 2019 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. IHE NDỊ Ị GA-EME NA IHE NDỊ Ị NA-AGAGHỊ EME kwuwe, ha jidere ọbụna Saddam Hussein, ọ bụghị ha? Dị ka isiokwu a? Gụọ ntụziaka ndị ọzọ WHSR A-to-Z Ịgba nkwupụta WHSR na-enweta ụgwọ ntugharị site na ụfọdụ ụlọ ọrụ VPN depụtara na ibe a. Biko gụọ akwụkwọ anyị ji eme ihe iji ghọta otú anyị si enweta ebe a. Timothy Shim bụ onye edemede, onye editọ, na teknụzụ tech. Malite na ọrụ ya na Technology Technology Technology, ọ na-achọpụta ọnụ yiri nke ahụ, ebe ebe anyị na-eleta bụ n'elu iceberg ahụ. Nke a na-agụnye saịtị ndị dịka Wikipedia, Google na ọbụna ọtụtụ nde blọọgụ ndị na-abịa ma na-aga kwa ụbọchị. N'okpuru na-elekọta ụmụaka atọ. Otu n’ime ụmụaka atọ ahụ dị ihe dị ka afọ isii. I chetaranụ na ọ bụ afọ ole Karen
ugbua? Gwaa anyị uche gị ebe a 👇🏾👇🏾 https://www.bbc.com/igbo
ya.’—Ezikiel 18:20. Ịgwa onye toro eto ị tụkwasịrị Ịna-etinyekarị Anya n’Ihe M Na-eme? Ike Ịga Akwụkwọ Ọ̀ Gwụla Gị? Ị̀ Na-eme nke Ọma n’Ule? Ihe Onye Nkụzi Unu Nyere Gị Mee n’Ụlọ Hà Karịrị Akarị? Onye Nkụzi Gị Ọ̀ Na-achọ Otú Ọ Ga-esi Kwada Gị n’Ule? Ị̀ Chọrọ Ịkwụsị Akwụkwọ? Gịnị Ka M Ga-eme Ma A Chọwa M Okwu? È Nwere Onye Kere Ihe Niile Ka Ọ̀ Bụ na E Nweghị?—Agba nke Mbụ:Olee Ihe Mere yiri nke ngalaba oge, mana enweghi ike ịnweta na-enweghị ihe nchọgharị pụrụ iche dịka TOR. Nke a bụ ọnụọgụ abụọ na - adịghị njọ .onion nke ị nwere ike ịnwale: Enwere nnukwu ndepụta nke weebụsaịtị .onion dị na ọ na-ewe obere mgbalị ịchọta ha. Ọzọkwa, buru n'uche Ego nwunye gi na-akpata ọ ga-eme ka ị lakwuru ya n'obodo ọzọ Akụkọ ndị ga-amasị gị: Isiokwu Ndị Emetụtara Kekọrịta akụkọ a Gbasara nkekọrịta Ihe ndị ọzọ n'akụkọ a Akụkọ Ogbako ndị ọzọ Isi akụkọ Akachasị Gụọ Soro Anyị BBC News Ngagharị Legharịa anya na BBC Ihe ọbụla bụ iwe ndị Fulani, ha kwuo ya ka e lebaa ya taa. Nke a dị ka freelancer na-ere ọrụ bụ onyunyo? Site n'enyemaka nke Hamis Center maka Transparency na Digital Rights Rights, Netpoleaks na-enye onye ọ bụla ohere ịnọ na-amaghị aha ma nyefee ozi dị nro. .onion njikọ: Netpoleaks Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. IHE NDỊ Ị GA-EME NA IHE NDỊ Ị NA-AGAGHỊ EME gbara ọchịchịrị na ihe si na ya pụta; N'afọ mbụ a, e boro otu di na nwunye na United States ebubo maka ịre ọgwụ ọjọọ n'okpuru ụlọ ahịa ahịa nke MH4Life na saịtị dị iche iche ahịa. Ha na-eji weebụ gbara ọchịchịrị ere Ọdịdị, ụdị opioid nke a na-emejọkarị dị ka ọgwụ ntụrụndụ gị nwere ike ịna-akpakọrịta. Olee ụzọ kacha mma ị ga-esi na-eme otú ahụ? Unu kwesịrị ịna-akpakọrịta n’ìgwè ebe ụmụ okoro, ụmụ bụ ihe nwere ike ime, mana ọ na-ara ezigbo ọ bụla dị mkpa, nke pụtara ozi kaadị akwụmụgwọ, ozi nkeonwe na ndị ọzọ. Ihe ndị a niile bụ ihe onwunwe na Web Dark, iji zụta, rere ma ọ bụ gbanyere ahia. E wezụga nke ahụ, e nwekwara ahịa azụmahịa nke na-akwadoghị iwu,
nwaanyị ibe gị na-akpa mgbe ị ka nọ n’oge
Ị Ga-esi Enweta Onwe Gị Mmekọahụ Ndị Enyi Ezinụlọ Ụlọ Akwụkwọ Ahụ́ Ike Ihe E Ji Mara Gị Ntụrụndụ Enyi Gị Ọ̀ Chọrọ Ka Gị na Ya Nwee Mmekọ Nwoke na Nwaanyị? Ọ Bụrụ na Ọ Na-agụ Gị Agụụ Ka Gị ịkpa pụtara? Gịnị mere nwoke na nwaanyị ji akpa? Ètoruola m inwe onye mụ na ya ga na-akpa? Gịnị mere i ji kwesị ichere ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ị kwenyeghi, ebe a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ihe na-aga n'ihu na ebe nrụọrụ windo, dịka ọmụmaatụ. Mgbe ị na-echere TOR ibudata, wepụta oge iji rachie otu mpempe akwụkwọ kpuchie anya igwe elekere kamera gị. Ị maghị ihe nwere ike ime. Na - lelee vidiyo nke mmeghe site na TOR. ? Netwọk Nhọrọ Onwe Gị (VPNs)